Osisi wepụ ihe ntanetị ntanetị - ndị ahịa nke AASraw
/ ngwaahịa / Osisi wepụ
N'isiokwu a, anyị na-ebubata mkpụrụ osisi dị iche iche na-ewepu akụ, dị ka Bromelain, mmanụ ocha, wdg.
Bromelain bụ enzyme nke achọtara na painịpiapịịl na nke a na-atụ na painia. Ndị mmadụ na-eji ya maka ọgwụ.
A na-eji Bromelain mee ihe iji belata ọzịza (mbufụt), karịsịa nke imi na sinuses, mgbe a gwọchara ya ma ọ bụ merụọ. A na-ejikwa ya maka hay fever, na-agwọ ọrịa obi na-agụnye ọnyá na ọnya (ulcerative colitis), wepụ anụ ahụ nwụrụ ma mebie emebi mgbe ọnyụ ọkụ (debridement), igbochi nchịkọta mmiri n'ime ọkụ (pulmonary edema), ahụ ike, mmebi ahụ na-akpali akpali, na-egbochi clotting, meziwanye ọgwụ nke ọgwụ nje, igbochi kansa, na-egbochi ọrụ, na-enyere ahụ aka iwepu abụba.
A na-ejikwa ya iji gbochie ahụ ike mgbe ị na-emega ahụ. Ejila ihe a mee ihe, ihe àmà na-egosi bromelain anaghị arụ ọrụ maka nke a.
Ụfọdụ ndị na - eji ngwaahịa (Phlogenzym) maka ọrịa ogbu na nkwonkwo (nke ogbu na nkwonkwo) nke na - ejikọta bromelain na trypsin (protein) na rutin (ihe dị na buckwheat). Bromelain eji mee ihe a yiri ka ọ na-ebelata ihe mgbu ma melite ọrụ ikpere na ndị nwere ọrịa ogbu na nkwonkwo.
Enweghi ihe omuma sayensi iji chọpụta ma bromelain ma ọ bụ na ọ dị irè maka ọ bụla ojiji ndị ọzọ.
Bromelain yiri ka ọ na - eme ka ahụ nwee ihe ndị na - ebute mgbu na ọzịza (mbufụt).
Bromelain nwekwara chemicals na-egbochi uto nke mkpụrụ ndụ tumo na ịkụkọ ọbara na-adịghị ngwa ngwa.
Akwukwo anumanu ahu, onye South America na mpaghara a ma ama nke ndi ogwu ndi mmadu, bu otu n'ime uzo kachasi abuo n'uwa nke bromelain enzyme. Ọ na-agụnye ọtụtụ endopeptidases na ogige dị ka phosphatase, glucosidase, peroxidase, cellulase, escharase na protease inhibitors. A na-ejikarị "bromelain" nke e rere na ntinye ma ọ bụ nke mmezigharị na enzymes nke a na-amịpụtara site na painịpịpị ma ọ bụ cores, kama ịbụ anụ ahụ.
A na-eji ya eme ihe dị ka ọgwụgwọ a na-agwọ ọrịa iji mesoo ihe ọ bụla site na nsí na allergies, anwụrụpị ọ bụghị nanị na ọ na-ejupụta na enzyme a, kamakwa vitamin C, vitamin B1, potassium, manganese na phytonutrients. Ọ bụ ezie na painiapulu nwere ọtụtụ uru, ezigbo ihe nzuzo na ike ike ya bụ bromelain.
Kedu ihe bromelain ji eme? N'ime ụwa ọgwụ, a na-eji usoro a na-adọrọ adọrọ mee ihe dịka onye na-ahụ maka ọgwụ na-egbu egbu ma na-egbochi ya. Nnyocha a egosila na o nwere fibrinolytic, antiedematous na antithrombotic Njirimara, nke pụtara na ọ na-enyere aka igbochi mkpịsị ọbara, edema na ọzịza. Na n'oge gara aga, a na-ejikwa enzyme a dịka onye na-anụ anụ, n'ihi na ọ na-enye aka na-eme ka ahụ jụụ ma nwee ahụ iru ala, ụbụrụ na-egbuke egbuke na anụ ahụ jikọtara ya. Tụkwasị na nke ahụ, nnyocha ndị na-adịbeghị anya achọtawo ihe àmà na enzyme a na-egbochi nsị anụ ahụ na ụzọ ya, nke na-egosi na a pụrụ iji bromelain agwọ ọrịa dịgasị iche iche, nwere ike ịgụnye kansa.
N'ile anya na akwukwo sayensi, nke gunyere ihe 1,600-tinyere ihe ndi na-achoputa uru ndi ogwu nke bromelain, negosi na ejiriwo ya mee ihe banyere nsogbu di iche iche nke ahuike, tinyere:
Ihe mmerụ ahụ jikọtara, dị ka ACL anya mmiri
Anwụrụ ọkụ aka
Ọrịa ogbu na nkwonkwo, nkwonkwo obi na ọrịa ogbu na nkwonkwo
Ihe dị ka nrịkasi obi ma ọ bụ afọ ọsịsa
Ọrịa na-eme ka mmadụ nwee onwe ya
Mkpali bowel ọrịa
Ọrịa nje, dịka bronchitis na sinusitis
Ọrịa na-emegharị ahụ ma na-agwọ ngwa ngwa nke ọnyá akpụkpọ anụ ma ọ bụ ọkụ
Enweghị ike ịṅụ ọgwụ ọjọọ, karịsịa ọgwụ nje, na mgbaàmà n'ihi ịṅụ ọgwụ
Epeepe agba, Seville oroma, oroma oroma, bigarade oroma, ma ọ bụ marmalade oroma na-ezo aka citrus osisi (Citrus × aurantium) na mkpụrụ ya. Ọ bụ obodo nke dị n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ Eshia, ma gbasaa site na ụmụ mmadụ n'ọtụtụ akụkụ ụwa. A na-achọta osisi ọhịa n'akụkụ iyi dị iche iche na mpaghara Florida na The Bahamas mgbe a kpọbatara ya na Spain, bụ ebe a kpọbatara ya ma bido na-amalite na 10th centuries site na Moors. A na-ere mmanụ oroma dị ka ihe oriri na-edozi ahụ n'ihi ihe ndị na-akpali akpali, ọ bụ ezie na data nchekwa dị na ya ma ọ bụrụ na e jikọtara ya na ọrịa dị iche iche gụnyere ọrịa strok na ọgụ obi.
A na-eji ọtụtụ ohia oroma mmanụ maka mmanu dị mkpa ha, a na-ahụkwa ha na mmanu, nke a na-eme dị ka ihe ọkụkọ ma ọ bụ dịka ihe mgbaze. A na-eji ọtụtụ ohia dị iche iche Seville mee ihe na mmepụta nke marmalade.
A na-ejikwa mmanụ oroma na-eji ọgwụ agwọ ọrịa eme ihe dị ka ihe na-akpali akpali ma na-egbu nri, n'ihi na ọ bụ ihe na-eme ihe, synephrine. Ejikọtara ihe ndị na-egbu mmanụ na-egbuke egbuke na ọtụtụ nsogbu na ọnwụ dị njọ, ndị otu na-azụ ahịa na-ekwokwa na ndị mmadụ na-ezere iji mkpụrụ osisi ahụ na-agwọ ọrịa. Ọ ka na-ejedebe ma ọ bụrụ na mmanụma dị ilu na-emetụta ọnọdụ ahụike nke obi na mkpụrụ obi, site n'onwe ya ma ọ bụ n'ụdị ya na ihe ndị ọzọ. A na-ewepụta ihe eji edepụta ihe gbasara ihe ndị dị na omeiwu nke National Institute of Standards and Technology (NIST), maka mkpụrụ osisi ala, wepụ ma sie ike na-edozi ọnụ, tinyere ndị ahụ ejikọtara ọnụ n'otu ihe.